Biriq dad ku dishay Miyiga Dhuusamareeb - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Biriq dad ku dishay Miyiga Dhuusamareeb
Biriq dad ku dishay Miyiga Dhuusamareeb
April 30, 2020 admin1312
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Galmudug iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa xalay waxaa ka da’ay Roobab Mahiigaan ah oo wata Gugac ( Onkod) iyo Biriq, waxaana la sheegay in biriq ku dhacday qoys dagan miyiga Dhuusamareeb.
Ugu yaraan 4 ruux oo qoys ah ayaa ku geeriyooday deegaanka Innamad oo bari kaga beegan Magaaladda Magaaladda Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.
Biriqda ayaa ku dhacday reerka oo ka koobnaa 7-qof iyadoo isla goobta ku dishey afar caruur ah , hooyadii reerka iyo mid ka mid ah caruurta ayaa dhaawacmay biriqda sida dadka deegaanku sheegayaan.
Roobab xooggan oo ay watay Biriq iyo Onkod ayaa abaara shantii saac oo habeeno ka bilaawday Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos taga waxa uuna istaagay wax yar uun ka hor salaadii subax ee saaka sida dadka deegaanka ku waramayaan.
Sidoo kale Roobka ayaa xalay da’ay magaalada Camaara Koofurta Gobolka Mudug, waxaana roobku biyo dhigay gudaha iyo hareeraha magaalada. Inta badan magaalooyinka ku yaala gobolka Galgaduud ayaa xalay Roobsaday.
Dowladda Ammaro duldhigtay Masaajidda
Soomaaliya: 19 Xaalado Cusub Oo COVID-19 Ah Ayaa La Diiwaan Geliyay
Qalbi Dhagax Oo Maanta Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Kismaayo
October 12, 2018 October 12, 2018 News Editor